တခါတုနျးက အငျမတနျမှကို စိတျတို၊ စိတျ ဆတျတဲ့ကောငျလေး တယောကျရှိ သတဲ့။ တနကေ့တြော့ သူ့အဖကေကောငျလေး ကို အိမျရိုကျသံတထုပျ ပေးလိုကျပွီး ပွောပါတော့တယျ။ မငျးတခါ စိတျတိုတိုငျး သံတခြောငျးကို နောကျဖေး က ဝငျးထရံတိုငျမှာ သှားရိုကျ ခကြှောတဲ့။ အဖကေ အဲဒီလိုပွောပွီး သံထုပျကိုပေး လိုကျတယျတဲ့။
ပထမနမှေ့ာပဲ ကောငျလေးဟာ ဝငျးထရံတိုငျ မှာ သံပေါငျး ၃၇ ခြောငျး ရိုကျသှငျး ဖွဈ သှားတယျ။ အဲဒီလိုနဲ့ သူစိတျတိုတိုငျး သံလေးတှကေို ဝငျးထရံမှာ ရိုကျရငျးရိုကျရငျး ကောငျလေးဟာ သူ့စိတျ သူ ထိနျးနိုငျလာသတဲ့။ သံရိုကျခကျြတှဟောလညျး တနထေ့ကျ တနေ့ ကြဲလာခဲ့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ ကောငျလေးဟာ ဝငျးထရံမှာ သံပွေး ရိုကျတာထကျ စာရငျ ဒေါသဖွဈနတေဲ့ စိတျကို ထိနျးရတာ ပိုလှယျမှနျး သဘောကျပေါကျလာ တော့တယျ အဆုံးမှာ ကောငျလေးဟာ စိတျမတိုပဲနေ နိုငျတဲ့နကေို့ ရောကျလာရော။
ကောငျလေး က ပွေးပွီး သူ့အဖကေို သတငျး သှားပို့တယျ။ အဖရေေ… သားတော့ စိတျကို ထိနျးနိုငျသှား ပွီဗြ။ အဲ့ဒီလိုကတြော့ သူအဖကေ တမြိုးခိုငျး ပွနျရော။ မငျးကိုယျမငျး ဒေါသမဖွဈအောငျ တနကေုနျ ထိနျးနိုငျပွီဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီသံတှကေို ပွနျနုတျဦးကှာ။ တနထေိ့နျးနိုငျရငျ ညအိပျခါနီး တခြောငျးနှုနျးနဲ့ နှုတျနျောလို့ မှာလိုကျသတဲ့။
ရကျတှကွောလာတော့ ကောငျလေး က သူ့အဖကေို ပွောနိုငျသှားတယျ။ အဖရေေ သားရိုကျခဲ့တဲ့ သံတှအေားလုံးကို နှုတျပွီးသှားပွီ။ တခြောငျးမှ မကနျြတော့ဘူး။ သညျအခါ အဖလေုပျတဲ့သူကသားရဲ့လကျ ကို ဆှဲပွီး သားရိုကျခဲ့တဲ့ ဝငျးထရံဆီကို ချေါသှားတယျ " တျောတယျ… ငါ့သား " လို့လညျး ဆိုပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သား သခြောကွညျ့စမျး။ ဝငျးထရံတိုငျမှာ အပေါကျတှဖွေဈ ကနျြခဲ့ တယျနျော။ ဒီဝငျးထရံတိုငျတှကေ အရငျတုနျးက လို ခြောခြောမှမှေ့ေ့ မဟုတျတော့ဘူးဆိုတာ သားမွငျတယျ မဟုတျလား။
အေး သားက စိတျတိုတိုနဲ့ ပါးစပျက ပွောခြ လိုကျတဲ့အခါ တဖကျသားဆိုတဲ့ ဝငျးထရံ တိုငျမှာ အခုလို အမာရှတျတှေ ထငျကနျြရဈခဲ့ တတျတယျ သားရယျ။
အဲဒီလိုပဲ လူတယောကျကို သားက ဓါးနဲ့ထိုး လိုကျတယျ ပွီးရငျ ဓါးပွနျနှုတျပွီး ရှိခိုးတောငျပနျတယျ ဆိုပါစို့။ သားဘယျနှဈခါဘဲ ရှိခိုးတောငျးပနျပါစေ ဒဏျရာနဲ့ အမာရှတျတှကေတော့ မလှဲမသှေ ကနျြခဲ့မှာပဲ ငါ့သားရယျ…. တဲ့ ။
တကယျတော့ မိတျဆှေ သူငယျခငျြးတှေ ဆိုတာ အဖိုးတနျတဲ့ ရတနာတှပေါပဲ။ သူတို့ဟာ ငါတို့တှကေို ပြျောရှငျ ရယျမောစတေယျ အားပေးကူညီတယျ ဒုက်ခ၊ သုခ တှကေို လညျး မြှဝခေံစား ကွတယျ။ ရငျဖှငျ့သမြှကို ဂရုစိုကျ နားထောငျပေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ တခုခုဆို စိတျလိုကျမာနျပါ မလုပျနဲ့။
သူတို့ကို သံနှုတျရာကနျြခဲ့တဲ့ ဝငျးထရံတှေ အဖွဈ မရောကျပါစနေဲ့။ ကိုယျ့မိတျဆှေ သူငယျခငျြးတှကေို ကိုယျက ဘယျလောကျ ဂရုစိုကျကွောငျး သူတို့ကိုလညျး သူတို့ရဲ့ မိတျဆှတှေအေပျေါ ဂရုစိုကျလာ အောငျ လုပျပေးသငျ့ ကွောငျးပွောကွားပေးပါ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျတိုငျက သူငယျခငျြးကောငျး မိတျဆှကေောငျးအဖွဈ သတျမှတျထားတဲ့ သူတှဆေီကို လကျဆငျ့ကမျးပါ။
တခါတုန်းက အင်မတန်မှကို စိတ်တို၊ စိတ် ဆတ်တဲ့ကောင်လေး တယောက်ရှိ သတဲ့။ တနေ့ကျတော့ သူ့အဖေကကောင်လေး ကို အိမ်ရိုက်သံတထုပ် ပေးလိုက်ပြီး ပြောပါတော့တယ်။ မင်းတခါ စိတ်တိုတိုင်း သံတချောင်းကို နောက်ဖေး က ဝင်းထရံတိုင်မှာ သွားရိုက် ချေကွာတဲ့။ အဖေက အဲဒီလိုပြောပြီး သံထုပ်ကိုပေး လိုက်တယ်တဲ့။
ပထမနေ့မှာပဲ ကောင်လေးဟာ ဝင်းထရံတိုင် မှာ သံပေါင်း ၃၇ ချောင်း ရိုက်သွင်း ဖြစ် သွားတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ သူစိတ်တိုတိုင်း သံလေးတွေကို ဝင်းထရံမှာ ရိုက်ရင်းရိုက်ရင်း ကောင်လေးဟာ သူ့စိတ် သူ ထိန်းနိုင်လာသတဲ့။ သံရိုက်ချက်တွေဟာလည်း တနေ့ထက် တနေ့ ကျဲလာခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကောင်လေးဟာ ဝင်းထရံမှာ သံပြေး ရိုက်တာထက် စာရင် ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ကို ထိန်းရတာ ပိုလွယ်မှန်း သဘောက်ပေါက်လာ တော့တယ် အဆုံးမှာ ကောင်လေးဟာ စိတ်မတိုပဲနေ နိုင်တဲ့နေ့ကို ရောက်လာရော။
ကောင်လေး က ပြေးပြီး သူ့အဖေကို သတင်း သွားပို့တယ်။ အဖေရေ… သားတော့ စိတ်ကို ထိန်းနိုင်သွား ပြီဗျ။ အဲ့ဒီလိုကျတော့ သူအဖေက တမျိုးခိုင်း ပြန်ရော။ မင်းကိုယ်မင်း ဒေါသမဖြစ်အောင် တနေကုန် ထိန်းနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီသံတွေကို ပြန်နုတ်ဦးကွာ။ တနေ့ထိန်းနိုင်ရင် ညအိပ်ခါနီး တချောင်းနှုန်းနဲ့ နှုတ်နော်လို့ မှာလိုက်သတဲ့။
ရက်တွေကြာလာတော့ ကောင်လေး က သူ့အဖေကို ပြောနိုင်သွားတယ်။ အဖေရေ သားရိုက်ခဲ့တဲ့ သံတွေအားလုံးကို နှုတ်ပြီးသွားပြီ။ တချောင်းမှ မကျန်တော့ဘူး။ သည်အခါ အဖေလုပ်တဲ့သူကသားရဲ့လက် ကို ဆွဲပြီး သားရိုက်ခဲ့တဲ့ ဝင်းထရံဆီကို ခေါ်သွားတယ် " တော်တယ်… ငါ့သား " လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သား သေချာကြည့်စမ်း။ ဝင်းထရံတိုင်မှာ အပေါက်တွေဖြစ် ကျန်ခဲ့ တယ်နော်။ ဒီဝင်းထရံတိုင်တွေက အရင်တုန်းက လို ချောချောမွေ့မွေ့ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ သားမြင်တယ် မဟုတ်လား။ အေး သားက စိတ်တိုတိုနဲ့ ပါးစပ်က ပြောချ လိုက်တဲ့အခါ တဖက်သားဆိုတဲ့ ဝင်းထရံ တိုင်မှာ အခုလို အမာရွတ်တွေ ထင်ကျန်ရစ်ခဲ့ တတ်တယ် သားရယ်။
အဲဒီလိုပဲ လူတယောက်ကို သားက ဓါးနဲ့ထိုး လိုက်တယ် ပြီးရင် ဓါးပြန်နှုတ်ပြီး ရှိခိုးတောင်ပန်တယ် ဆိုပါစို့။ သားဘယ်နှစ်ခါဘဲ ရှိခိုးတောင်းပန်ပါစေ ဒဏ်ရာနဲ့ အမာရွတ်တွေကတော့ မလွဲမသွေ ကျန်ခဲ့မှာပဲ ငါ့သားရယ်…. တဲ့ ။
တကယ်တော့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ဆိုတာ အဖိုးတန်တဲ့ ရတနာတွေပါပဲ။ သူတို့ဟာ ငါတို့တွေကို ပျော်ရွှင် ရယ်မောစေတယ် အားပေးကူညီတယ် ဒုက္ခ၊ သုခ တွေကို လည်း မျှဝေခံစား ကြတယ်။ ရင်ဖွင့်သမျှကို ဂရုစိုက် နားထောင်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့် တခုခုဆို စိတ်လိုက်မာန်ပါ မလုပ်နဲ့။
သူတို့ကို သံနှုတ်ရာကျန်ခဲ့တဲ့ ဝင်းထရံတွေ အဖြစ် မရောက်ပါစေနဲ့။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ်က ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်ကြောင်း သူတို့ကိုလည်း သူတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေအပေါ် ဂရုစိုက်လာ အောင် လုပ်ပေးသင့် ကြောင်းပြောကြားပေးပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်က သူငယ်ချင်းကောင်း မိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ သူတွေဆီကို လက်ဆင့်ကမ်းပါ။